2 Madzimambo 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 10:1-36
10 Zvino Ahabhi akanga aine vanakomana makumi manomwe+ muSamariya.+ Naizvozvo Jehu akanyora tsamba, akadzitumira kuSamariya kumachinda+ okuJezreeri, varume vakuru+ nevatarisiri vevana vaAhabhi, achiti: 2 “Zvino panguva inosvika tsamba ino kwamuri, zvamuine vanakomana vashe wenyu, uye zvamuine ngoro dzehondo nemabhiza+ neguta rakavakirirwa, nezvombo, 3 munofanira kuona kuti pavanakomana vashe wenyu ndoupi akanaka uye akarurama kupfuura vamwe, mumugadze pachigaro choumambo chababa vake.+ Ibvai marwira imba yashe wenyu.” 4 Zvino ivo vakatya kwazvo, vakatanga kuti: “Tarirai! Madzimambo maviri+ haana kumira pamberi pake, isu tichamira seiko?”+ 5 Naizvozvo munhu aitarisira imba neaitarisira guta nevarume vakuru nevatarisiri vevana+ vacho vakatumira shoko kuna Jehu vachiti: “Tiri vashandi venyu, uye tichaita zvose zvamunotiudza. Hatisi kuzogadza chero munhu upi zvake kuti ave mambo. Itai zvakakunakirai.” 6 Naizvozvo akavanyorera tsamba yechipiri, achiti: “Kana muri kurutivi rwangu,+ uye muri kuteerera inzwi rangu, torai misoro yevarume, ivo vanakomana+ vashe wenyu, muuye kwandiri kuJezreeri+ mangwana panguva ino.” Zvino vanakomana vamambo, ivo varume makumi manomwe, vaiva pamwe chete nevarume vanokudzwa veguta vakanga vachivachengeta. 7 Tsamba yacho payakangosvika kwavari, vakatora vanakomana vamambo vakavauraya, varume makumi manomwe,+ vachibva vaisa misoro yavo mutswanda, vakaitumira kwaaiva kuJezreeri. 8 Nhume+ yacho yakabva yasvika, ikamuudza kuti: “Vauya nemisoro+ yevanakomana vamambo.” Naizvozvo akati: “Iitei mirwi miviri panopindwa napo pagedhi kusvikira mangwanani.”+ 9 Zvino ava mangwanani iye akabuda. Akabva amira akati kuvanhu vose: “Makarurama.+ Ini ndakamukira+ ishe wangu ndikamuuraya;+ asi ndiani akauraya ava vose? 10 Saka zivai kuti hakuna kana chinhu chimwe chete pane zvakataurwa naJehovha chisingazoitiki,+ zviya zvakataurwa naJehovha pamusoro peimba yaAhabhi;+ uye Jehovha aita zvaakataura achishandisa mushumiri wake Eriya.”+ 11 Jehu akaurayawo vose vakanga vasara veimba yaAhabhi muJezreeri nevarume vake vose vaikudzwa+ nevaaizivana navo nevapristi vake,+ kusvikira asisina kumusiyira kana mumwe chete akapona.+ 12 Zvino akasimuka, akaenda kuSamariya. Imba yokusungira makwai yevafudzi yaiva panzira pacho. 13 Jehu akasangana nehama+ dzaAhaziya+ mambo waJudha. Paakati kwavari, “Ndimi vanaani?” ivo vakabva vati: “Tiri hama dzaAhaziya, uye tiri kuenda kunobvunza kana vanakomana vamambo nevanakomana vavahosi vachifara.” 14 Akabva ati: “Vabatei vari vapenyu!”+ Naizvozvo vakavabata vari vapenyu, vakavaurayira pamugodhi wemvura weimba yokusungira makwai, varume makumi mana nevaviri, uye haana kusiya kana mumwe chete wavo.+ 15 Zvaakanga achienda achibva ipapo, akasangana naJehonadhabhi+ mwanakomana waRekabhi+ achiuya kuzosangana naye. Paakamukwazisa,+ iyewo akati kwaari: “Mwoyo wako wakarurama kwandiri here, sezvakaita mwoyo wangu kumwoyo wako?”+ Jehonadhabhi akati: “Wakarurama.” “Kana zvakadaro, ndibate ruoko.” Naizvozvo akamubata ruoko. Ipapo akamukwidza mungoro maaiva.+ 16 Akabva ati: “Handei unoona kusashivirira kwandinoita kukwikwidzana+ naJehovha.” Zvino Jehonadhabhi akaendwa naye ari mungoro yehondo yaJehu. 17 Iye akazosvika kuSamariya. Zvino akauraya vose vakanga vasara veimba yaAhabhi vaiva muSamariya, kusvikira avatsakatisa,+ maererano neshoko raJehovha raakanga ataura kuna Eriya.+ 18 Uyezve, Jehu akaunganidza vanhu vose akati kwavari: “Ahabhi akanamata Bhaari zvishoma.+ Asi Jehu achamunamata kwazvo. 19 Naizvozvo shevedzai vaprofita+ vose vaBhaari, vanamati+ vake vose nevapristi+ vake vose vauye kwandiri. Ngaparege kushayikwa kunyange mumwe chete, nokuti ndinoda kubayira chibayiro chikuru kuna Bhaari. Munhu achashayikwa haazorambi achirarama.” Asi Jehu akaita nokunyengera,+ kuti aparadze vanamati vaBhaari. 20 Jehu akati: “Tsaurirai Bhaari musangano mukuru.” Naizvozvo vakazivisa nezvawo. 21 Pashure paizvozvo Jehu akatuma shoko pakati pevaIsraeri vose,+ zvokuti vanamati vose vaBhaari vakauya. Hakuna kunyange nomumwe chete asina kuuya. Vakaramba vachipinda muimba yaBhaari,+ imba yaBhaari ikazara kubvira kumucheto kusvikira kumucheto. 22 Akabva ati kumunhu aitarisira nzvimbo inochengeterwa nguo: “Budisa nguo dzevanamati vose vaBhaari.” Naizvozvo akavabudisira zvipfeko zvacho. 23 Jehu naJehonadhabhi+ mwanakomana waRekabhi vakabva vapinda muimba yaBhaari. Zvino akati kuvanamati vaBhaari: “Nyatsotsvakai, muone kuti hapana mumwe wevanamati vaJehovha ari muno nemi, kunze kwevanamati vaBhaari chete.”+ 24 Vakazopinda kuti vape zvibayiro nezvinopiwa zvinopiswa, uye Jehu akamisa varume makumi masere vaaiva navo panze akati: “Kana mumwe munhu pavanhu vandiri kuisa mumaoko enyu akapukunyuka, mweya wake uchatsiviwa nomweya weanomurega achipukunyuka.”+ 25 Zvino paakanga angopedza kupa chinopiwa chinopiswa, Jehu akabva ati kuvamhanyi nevabatsiri vacho: “Pindai muvauraye! Musarega kunyange mumwe chete achibuda.”+ Vamhanyi nevabatsiri+ vacho vakatanga kuvauraya nomuromo webakatwa, vachivakanda kunze, vakaramba vachienda kusvikira kuguta reimba yaBhaari. 26 Vakabva vabudisa shongwe tsvene+ dzeimba yaBhaari, vakadzipisa.+ 27 Vakaputsawo shongwe tsvene yaBhaari,+ vakaputsa imba yaBhaari,+ uye vakaiita chimbudzi+ kusvikira nhasi. 28 Naizvozvo Jehu akatsakatisa Bhaari pakati paIsraeri. 29 Kungoti Jehu haana kurega kutevera zvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa+ Israeri nazvo, idzo mhuru dzendarama+ dzaiva imwe kuBheteri uye imwe kuDhani.+ 30 Naizvozvo Jehovha akati kuna Jehu: “Nokuti wakaita zvakanaka nokuita zvakarurama pamberi pangu,+ uye kuti wakaitira imba yaAhabhi+ maererano nezvose zvakanga zviri mumwoyo mangu, vanakomana vachagara pachigaro choumambo chaIsraeri nokuda kwako kusvikira kuchizvarwa chechina.”+ 31 Asi Jehu haana kuchenjerera kufamba mumutemo waJehovha Mwari waIsraeri nomwoyo wake wose.+ Haana kurega zvivi zvaJerobhoamu zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ 32 Mumazuva iwayo Jehovha akatanga kuparadza vaIsraeri zvishoma nezvishoma; uye Hazaeri+ akaramba achivauraya munharaunda yose yaIsraeri, 33 kubvira kuJodhani nechokumabvazuva, nyika yose yeGiriyedhi,+ vaGadhi+ vaRubheni+ vaManase,+ kubvira kuAroeri,+ riri pedyo nomupata une rukova weAnoni, iyo Giriyedhi neBhashani.+ 34 Mamwe mabasa ose aJehu nezvose zvaakaita nokuva nesimba kwake kwose, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 35 Jehu akazorara nemadzitateguru ake,+ vakamuviga muSamariya; uye mwanakomana wake Jehoahazi+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 36 Mazuva aJehu aakatonga Israeri ari muSamariya aiva makore makumi maviri nemasere.
2 Madzimambo 10